SUSE Nyanzvi Mazuva muMadrid, Seville neBarcelona | Linux Vakapindwa muropa
SuSE ichaita chiitiko muna Kukadzi 14, 16 na21 chakanangana nenyanzvi muchikamu ichi, kana sezvavanodaidza, iyo SUSE Nyanzvi Mazuva. Chiitiko ichi chichaitika kuSpain, mumaguta eSeville, Madrid neBarcelona zvakanyanya. Saka vese avo vanoshuvira kuenda, uye vari padyo nenzvimbo idzi mukati memazuva ataurwa pamusoro, vachakwanisa kunakidzwa nemusangano. Ehe, izvo zvakagadzwa zvinoitirwa nyanzvi uye nyanzvi mune ruzivo ruzivo chikamu.
Kune avo vari muAndalusia kana nzvimbo yekumaodzanyemba, chiitiko ichi chichaitika muSeville muna Kukadzi 21 kuChamber of Commerce, uye iri neiyi iyo iyo SUSE Nyanzvi Mazuva anovhara. Kune avo vanogara muMadrid kana pakati peninsula, vanogona kuenda pachiitiko ichi muna Kukadzi 14 kuRialto Theatre. Nepo maCatalan kana avo vari padyo nenzvimbo iyoyo, vachakwanisa kunakidzwa nezuva iri rinoshamisa musi waFebruary 16 muBarcelona, ​​kuAntoni Tàipes Foundation. Kuenda, kana uripo unofarira iwe unofanirwa kunyoresa kubatana uku.
Ikoko iwe unogona kuenda inotonhorera tech hurukuro, tech demos pane zvigadzirwa, nezvimwewo, zvese zvine chinangwa chekutungamira makambani uye nyanzvi kusarudza yavo tekinoroji yedata nzvimbo, gore, uye masisitimu anotarisana nematambudziko matsva, pane iwo ekushandurwa kwedigital, zvivakwa zvinotsanangurwa nesoftware uye neDevOps nyika. Uye kuti izvi zvigoneke, ichave nehunyanzvi pazviitiko izvi.
Arturo Gil achave mumwe weiyo nyanzvi dziripo uye ndiani achange achitungamira dingindira reDhijitari Shanduko. Iye achatiunzira ruzivo rwake mune izvi, nekuti akashandira imwe yemabhizimusi akakosha muSpain. Asi haizove yega, mimwe misoro ichataurwawo senge idzo dzinoreva nzvimbo dzemadatha dzinotsanangurwa nesoftware, mamishinari anonetsa masisitimu kana manejimendi akabatanidzwa enzvimbo dzeLinux ...
Kana iwe uchida rumwe ruzivo, shanyira webhu ino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » SUSE Nyanzvi Mazuva muMadrid, Seville neBarcelona